Bamise konke befuna izidingo | News24
Bamise konke befuna izidingo
PHOTO: lethiwe makhanyaKungesikhathi umphakathi ubhikisha ngoMsombuluko.
KUME nse ukusebenza endaweni yaseMaqongqo ngoMsombuluko mhla zili-18 kuNdasa (March) njengoba umphakathi, abamatekisi kanye nosomabhizinisi bevuke umbhejazane bavala umgwaqo ongenela kule ndawo.
Lo mphakathi ukhala ngokuthi kunemigwaqo eyibhuqu ekhona kule ndawo ekade bathenjiswa ukuthi bazolungiselwa yona kodwa kuze kube imanje ayikaze ilungiswe.
Bekungangeneki futhi kungaphumeki kulendawo njengoba umgwaqo kade uvalwe ngezihlahla ezinkulu, izimoto ezincane, amatekisi kanye namabhasi imbala.
Amalunga omphakathi abevutha bhe abeloku ehla enyuka ecula amaculo omzabalazo amanye ephethe izimbokodo, izinduku kanye nobhushu.
Bathi le migwaqo akukona ukuthi iwubhuqu nje kuphela kodwa inemigodi kanti futhi kweminye akusahambeki kuhamba imoto eyodwa kuphela enye kumele ingene esikhotheni ilinde ukuze kudlule leyo ezobe iphambana nayo.
Kweminye yemigwaqo abakhala ngayo kubalwa u-D1026, D1000 kanye naseMahlabathini.
UMnu Mkhe Ngcobo nonguSihlalo we KwaGcina Taxi Association uthe sekunzima ukusebenza kulemigwaqo ngenxa yesimo ekuso.Uthe okubuhlungu kakhulu ukuthi lemigwaqo ihamba amatekisi zonke izinsuku uma ngabe ethutha umphakathi.
“Ngonyaka owedlule saba nomhlangano noMnyango wezokuThutha bathi isabelozimali sikhona umgwaqo uzolungiswa kodwa salinda kwaze kwaba imanje.Amatekisi athutha umphakathi awasekho esimeni esihle ngenxa yokuthi ayakhahlazeka kulemigwaqo bese ayalimala.
“Sekukaningi sishaya nezingcingo sithi siyacela ukuthi okungcono ke sicela basilethele ugeleja ukuze kuzovaleka imigodi nemisele sikwazi ukuhamba kodwa izingcingo zethu abasazibambi,” kubeka yena.
Uqhube wathi ngaphambi kokuba babe nalesi siteleka baqale bathumela izincwadi ngisho nakuwona uMnyango wezokuThutha bebazisa ukuthi uma kungukuthi abanakwa bazovala umgwaqo kodwa akekho oke wafika wazokhulumisana nabo.
“Sibanikeze isikhathi esingangesonto ukuba kube khona into abayenzayo ngaloku beze bakhuluma nathi kodwa akukho lutho abakwenzile nokuyiyona into egcine isisiphoqa ukuba sigcine sesingena emgwaqeni ngoba kubonakala engathi ilona kuphela ulimi abaluzwayo lolo ngoba uma sikhuluma nabo abasizwa.”
Lo mphakathi uveze ukuthi ngaphambilini uMnyango wezokuThutha wabatshela ukuthi indawo engango 22km yomgwaqo ikhona imali yawo kodwa kuze kube manje akukaqala ukwakhiwa.
“Into esiyifunayo thina manje ukuthi sibone ngosonkontileka esefika ethi uzoqala ukusebenza ngoba phela imali satshelwa ukuthi ikhona. Njalo thina kule ndawo uma ngabe sifuna into kumele size singene emgwaqeni ukuze bezoqala basinake ngoba uma sikhuluma nabo kahle abasinaki. Naleli tiyela elisuka emapulazini lize lizofika lana baze balifake nje ingoba sasuke sangena emgwaqwni nokukhomba ngokusobala ukuthi ilona limi abaluzwayo lolo,” kusho elinye ilunga lomphakathi.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Mluleki Mntungwa uthe : “Umnyango umatasa nezinhlelo zokudweba (design).UNgqongqoshe uMnu Mxolisi Kaunda ubazisile abahlali ngaloku ngesikhathi ehlangana nabo.Ngenyanga kaMandulo (September) izinkontileka zizobe sezikwazi ukuqala nemigwaqo,” kuso yena.
Uthr imigwaqo yobhuqu ihlukunyezwe izikhukhula kanti iziphathimandla zithunyeliwe ukuba ziyohlola isimo.